जयकालिका प्लास्टिक उद्योगको ‘सोलार वाटर हिटर मिनी मेला’ तयारी | eAdarsha.com
जयकालिका प्लास्टिक उद्योगको ‘सोलार वाटर हिटर मिनी मेला’ तयारी
पोखरा, १९ कात्तिक । जयकालिका प्लास्टिक उद्योग प्रालिले सोलार वाटर हिटर मिनी मेला आयोजना गर्दैछ । पोखरा–२६ बूढीबजारमा कात्तिक २१ देखि २६ सम्म आयोजना हुने सो मेलाको आवश्यक तयारी पूरा भएको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रमेश खाँण ठकुरीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कोभिड–१९ संक्रमणविरुद्ध आवश्यक स्वास्थ्य सचेतना अपनाउँदै कम्पनीको शोरुम रहेको बूढीबजारमा ग्लोबल आईएमई बैंकनजिकै सो मेला हुनेछ । मेलाबाट ग्राहकले आफ्ना उत्पादनको बारेमा भरपूर जानकारी पाउने र विभिन्न सामग्री खरिदमा छुट पनि पाउनेछन् ।
कम्पनी स्थापनाको चौथो वार्षिकोत्सव अवसरमा हुने सो मिनी मेलामा आफ्ना उत्पादन प्रदर्शनीमा राखिने कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रमेश खाँण ठकुरीले जानकारी दिए ।
कम्पनीले यसअघि नै दशैंलगत्तै आक्रामक रुपमा बजार बिस्तार गर्ने योजना बुनेको थियो ।
जेके ब्राण्डका १ हजार लि.को पानीट्यांक उत्पादन गर्दै आएको कम्पनीले नयाँ डिजाइन र कलरमा १ हजार लि. र २ सय लि.को ट्यांक उत्पादन गर्छ । जसमा सेतो, पिंक तथा पहेंलो रंगमा उपलब्ध हुनेछ ।
भविष्यमा ३ हजार र ५ हजार लि.का ट्यांकसमेत उपलब्ध गराउने कम्पनीको लक्ष्य छ । हाल देशभर १ सयभन्दा बढी डिलरमार्फत फुट्दै नफुट्ने जेके ट्यांक उपलब्ध हुँदै आएको जनाइएको छ ।
कोरोना महामारी र ग्राहकको चाहना मध्यनजर गर्दै उधारो तथा बोनस स्कीम हटाएर डिलरले जेके ट्यांक नगदमा कारोबार गर्दा सुरुवातमै कम मूल्यमै सामान प्राप्त गर्नेछन् । जसले गर्दा ग्राहकले सस्तो मूल्यमा ट्यांक खरिद गर्न सक्ने कम्पनीका बजार प्रबन्धक कालिदास पोख्रेलले बताए ।
आफ्ना उत्पादन सहजै रुपमा ग्राहकमाझ पुर्‍याउन टिडिआर बिजिनेस हाउसमार्फत अनलाइन कारोबार गर्ने योजना रहेको बताइएको छ ।
पोखरा–३२, तल्लो गगनगौंडामा ६ रोपनी जग्गा भाडामा लिई संचालित यसखालको कम्पनी यस क्षेत्रकै पहिलो हो । कम्पनीले हाल पानीराख्ने ट्यांक (२ सयदेखि २ हजार लि.), यूपीभीसीको झ्यालढोका, पार्टेसन उत्पादन गर्दै आएको छ । साथै भारतीय सुप्रिम सोलार वाटर हिटरको आधिकारिक बिक्रेता हो ।
जेके ट्यांक, झ्यालढोका तथा पार्टेसन निर्माणमा मिसावटरहित एवं ओरिजिनल कच्चा पदार्थ प्रयोग भएकोले धेरै वर्ष टिकाउ हुने कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीले जेके ट्यांकमा ५० वर्षसम्मको वारेन्टी नै दिने गरेको छ ।
यस्तै, ३५ वर्षको वारेन्टी रहेको झ्यालढोका तथा पार्टेसनसमेत कीरा नलाग्ने, घामपानी, आगोले असरल नगर्ने, रंग लगाउनु नपर्ने, असिनापानी आउँदा आवाज कम दिने, बाहिरी तातो र चिसोभित्र नछिर्ने, आल्मुनियमभन्दा बलियो, काठभन्दा सस्तो, एसी जडानसमेत सहजै हुन्छ ।